I-Sperlonga, i-Romantic Room kwi-villa yangasese - I-Airbnb
I-Sperlonga, i-Romantic Room kwi-villa yangasese
Igumbi lakho lokulala e indawo yokuhlala nenesidlo sakusasa sinombuki zindwendwe onguRocco
Amaza aluhlaza, igumbi elihle kumgangatho we-villa ongekude kumbindi wedolophu, ofikelelekayo ngeenyawo ukusuka kwindlela yebhayisekile, ejikelezwe buhlaza kwaye kufutshane kakhulu nolwandle kunye neendawo zokupaka zabucala. I-villa inendawo yokungena ezimeleyo-
Amagumbi asanda kulungiswa kwaye ahonjiswe ngobumnandi. ebalaseleyo izibini abafuna ukonwabela iholide beach cwaka.
Izolile kwaye ibucala kakhulu, olu luphawu lwegumbi le-Onda Blue, indawo yokungena ezimeleyo, ipatio enomthunzi apho ungaphumla khona kwaye ube nesidlo sakusasa, igumbi lokuhlambela elitofotofo, igumbi elinencasa enencasa linyathelo eli-2 ukusuka elwandle.
Indawo yokupaka yabucala, i-wi-fi, i-air conditioning, i-smart TV, iketile, umatshini wekofu, i-milk frother kunye ne-minibar kwigumbi lokuzilawula ngokwakho isidlo sakusasa.
Yeyona ndawo ilungele labo bafuna ukuzikhulula isiphithiphithi yesixeko nizimele-bume ezolileyo, engqongwe uhlaza kunye amanyathelo ezimbalwa ukusuka elwandle kunye neziko. Mozzarella egqwesileyo kunye nesonka ekhaya kwakunye inyama ezingaqhelekanga kunye salami
Iindwendwe zinokuqhagamshelana nam ngefowuni, umyalezo kunye ne-imeyile okanye ngokuthe ngqo kwisiza